4-Chlorodehydromethyltestosterone poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Raw 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder (2446-23-3) Tsanangudzo
Chlorodehydromethyltestosterone inonzi steroid yakachengeteka uye inowanzotsanangurwa seine nzvimbo pane imwe nzvimbo pakati pe Dianabol, naAnavar. Turinabol haikwanisi kuisa aromatase muestrogen, saka isrogenic side effects haigoni, asi mimwe mitsara yakapiwa gentle gynocomastia zviratidzo. Chikonzero chaiicho hachisi chokwadi zvachose, asi kune mikana yeTurinabol ine chimwe chinhu pane zveestrogen receptor. Imwe ingangodaro ndeyokuti methyltestosterone yakasvibiswa panguva yekugadzira. Androgenic side-effects zvinoramba zvichigoneka, asi hazvigoni kuva dzakaoma.
Raw 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder is c17 alpha alkylated steroid, saka kukwanisa kwechiropa kukanganisa kunofanira kuongororwa paunenge uchigadzirisa chirongwa chinosanganisira icho. Muitiro wawo wakanaka kuchengetedza dhiyo mukati mehutano hwakanaka uye nguva yekushandiswa inofanira kunge yakakwana kumasvondo eA6 kuti usapinda hepatotoxicity. Uyewo shandisa chiropa detoxification kuwedzera.
Kemikari Name Oral turinabol; 4-Chloromethandienone
muchiso Name Oral turinabol
Molecular Wsere 334.88
Kunyorera Point 225-230 ° C
Biological Half-Life 16 maawa
Skukodzera Zvinonyanya kusvibiswa mukati
mvura, yakasununguka kusununguka
APane Ndiyo 4-chloro-yakashandurwa kubva kune metandienone (dehydromethyltestosterone).
Chii chinonzi Raw 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder (2446-23-3)?
Iyo Yakakura 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder (2446-23-3) mabasa
Kungofanana nedzimwe vana anabolic steroids, Turinabol (2446-23-3) ine simba rakanaka pakuchengeterwa kwe nitrogen uye protein synthesis pamwe nekusimudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa mumuviri wako. Zvose izvi, nzvimbo dzinokosha mukuvandudza yako anabolic atmosphere. Kazhinji, purotini yepineti ndiyo inonyanya kukosha mumusasa wemasumbu pamwe chete nehutano hwekushandiswa kwehuwandu hwemasero ako masero anovaka mapuroteni nemaitiro ekusimudza nitrogen achiita basa rinokosha mumapundu ako akaonda.
Munyika yezvokurapa, maTurinabol madheji anowanzopera, uye murwere wevarume anorayirwa kuti atore kuzere 5 kusvika 10mg pazuva kuti awane masimba kana mapfupa akaora. Kune rumwe rutivi, varwere vechikadzi vanotora chirwere chakaderera cheTurinabol che 1mg chete pazuva uye kana kuwedzerwa hakufaniri kuenda kupfuura 2.5mg pazuva. Mishonga inoita kuti murume ave nechimiro mumuviri, uye naizvozvo, vashandi vechikadzi vanogara vachikurudzirwa kutora madhoji maduku kuti vadzivise virilization.
Raw 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder (2446-23-3) Kushandisa
Tenga 4-Chlorodehydromethyltestosterone powder kubva kuBuasas.com